အောင်ဝေး – ကိုရွှေအောင်ဝေးတို့မ န္တလေးမှာနှဲ မှုတ် ခဲ့ ကြ စ ဉ် က | MoeMaKa Burmese News & Media
Aung Way - Poem
၂ ၀ ၁ ၃ က ဗျာတ ပ် မတော် သ စ် အ တွ က် အ မိ န့် 
ေ အာ င်ဝေး- အ လွ တ် တ ည် က န်ဘောများ (၅) ( ၆ )
ခက်ဦး - စနေတစ်နေ့ ဆရာမြနှင့် စာဖတ်သံများ
ပျံ သန်း နေ တဲ့ မြစ် ၊ စီး ဆင်း နေ တဲ့ ငှက် (Aung Way)
မြတ်စံ - "ထပ်မံခံစားမိသော ပုံရိပ်အပိုင်းအစများ(သို့) အတိတ်ကာလမှ သမိုင်းပုံရိပ်ခြေရာများ"
အောင်ဝေး - အ လွ တ် တ ည် က န်ဘောများ
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month January 2019 (91) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
အောင်ဝေး – ကိုရွှေအောင်ဝေးတို့မ န္တလေးမှာနှဲ မှုတ် ခဲ့ ကြ စ ဉ် က
Ko Aung Way & Son – in the past
(မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၁၆
ခေတ်ကလည်း မကောင်းဟန်၊ စနစ်ကလည်း ညောင်းပြန်၊ အဖြစ်ကလည်း ဟောင်းတန်သလောက် တော့ ဟောင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့၊ မမေ့နိုင်သေးပါ။
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၃၁)ရက်။
အဲဒီမှာ ကျနော်တို့တွေ နှဲမှုတ်ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
အိတ်ခ်ျ၊ အိုင်၊ ဗွီ ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးရန်ပုံငွေ၊ အဖြူရောင် သက်တံကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ။
ရန်ကုန်မှာ ကျနော်တို့ ပထမဆုံးပွဲကို ၂၀၀၆၊ မေလ(၆)ရက်၊ ဆရာစံလမ်း၊ မစ္စတာဂစ်တာ ကဖေးမှာ ကျင်းပခဲ့။ ဒီ ပထမဆုံးပွဲမှာ ရန်ပုံငွေ (၆၇)သိန်းကျော် အလှူခံရရှိခဲ့။
ဒီတုန်းက ဒေါက်တာခင်မေစုတို့၊ ဆရာမစုထားတို့၊ ဆရာမသန်းမြင့်အောင်တို့ “သုခရိပ်မြုံ” မှာ လက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ အိတ်ခ်ျ၊ အိုင်၊ ဗွီ ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေက စုစုပေါင်း (၁၃)ယောက်ပဲရှိသေး။ (ယခု ၁၃၀ မျှမကကျော်ပြီ။ မန္တလေးသုခရိပ်မြုံဆိုတာလည်းတိုးလာသည်)
ဒီတော့၊ မန္တလေးပွဲမှာရွတ်ဖို့ ကျနော်က ကဗျာတစ်ပုဒ် အသေအချာပြင်ဆင်ရေးဖွဲ့ထားလိုက်သည်။ အောက်ပါအတိုင်း။
ကလေးတ စ် ဒါ ဇ င် နဲ့တ စ်ယောက်
လူတွေက မုန့်လုံးတော့ စက္ကူကပ်ချင်တယ်
လူတွေက ဂျင်ဆန်းမီနဲ့တော့ လမ်းလျှောက်ချင်တယ်
“Rainbows are multi-colored.
Our performance is not divided by colors,
But all white and pure.
That’s why we called it ‘white rainbow’.” [ * ]
မိဘမေတ္တာ ငတ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့ ။
အကြင်နာ ကရုဏာလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့ ။
အပြစ်မဲ့တဲ့ ဓားစာခံကလေးတွေပေါ့ ။
ကမ္ဘာကြီးက အေ၊ အိုင်၊ ဒီ၊ အက်စ် တိုက်ဖျက်ရေးဆွေးနွေးနေတယ်
ကလေးတွေခမျာ အိတ်ခ်ျ၊ အိုင်၊ ဗွီ ပိုး ကူးစက်ခံနေရပြီ။
ကလေး တစ်ဒါဇင်နဲ့တစ်ယောက်ရှိတယ်လေ။ ။
သို့သော် … ။ မန္တလေးမှာ စစ်ပဒေသရာဇ်ကြီးရဲ့တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်နဲ့၊ ပွဲမှာ သီချင်းပဲ ဆိုခွင့်ရ။ ကဗျာရွတ်ဆိုခွင့်မရ၊ လုံးဝ မရခဲ့။
သို့သော် … ။ ကျနော်တို့ ဒီမန္တလေးပွဲမှာ ရန်ပုံငွေ (၁၀၂)သိန်း အလှူခံရအောင်၊ ပွဲကို စီစဉ် တင်ဆက်နိုင်ခဲ့။
မန္တလေးတိုင်း ထွေ/အုပ် က တာဝန်ကြီးကြီးရှိသူကိုယ်တိုင် ခန်းမထဲက ရှေ့ဆုံးခုံတန်းမှာ အကျအနထိုင်ပြီး ပွဲကို လာစောင့်ကြည့်နေသည်။ လာထောက်လှမ်းနေသည်။
ဘယ်ရမလဲ။ သူ့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာ ကျနော်တို့ကဗျာတွေ တွင်တွင်ရွတ်ခဲ့ကြသည်။ ကဗျာမြစ်ရေ သွင်သွင်စီးခဲ့လှပြီ။ ကျနော်တို့ကဗျာရွတ်နေတာကို အနှီပုဂ္ဂိုလ်မသိ။
ပွဲအဖွင့်မှာ၊ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပါဖောမန့်နှင့်အတူ ဆန်းထွဋ်နှင့်ချောအိသိမ်းတို့၊ ဇော်သက်ထွေး ရေးပေးထားတဲ့ကဗျာကိုရွတ်ပြီး စင်ပေါ်တက်လာသည်။ သီချင်းပဲ ဆိုခွင့်ပြုထားတဲ့စင်ပေါ်မှာ၊ လူတိုင်းက ကဗျာတွေ တက်တက်ရွတ်နေကြသည်။
အခမ်းအနားမှူး (မ)တင်မိုးလွင်ကအစ၊ မန္တလေးကပွဲစီစဉ်သူတွေအလယ်၊ ရန်ကုန်ကလိုက်လာကြတဲ့ သျှီ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ ငွေစင်သွန်း စတဲ့ကလေးတွေအဆုံး၊ အားလုံးဟာ ကဗျာဖြစ်နေကြတော့သည်။
တင်မိုးလွင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ ကိုစောဝေ စင်ပေါ်တက်လာသည်။ သူက ဘာကဗျာမှ မရွတ်ပါ။ သူ့ကိုယ်လုံး၀၀ကြီးကိုယ်နှိုက်က ကဗျာတုံးကဗျာခဲကြီးဖြစ်လို့နေသည်။
ပွဲပြီးခါနီးလာတော့၊ ကဗျာဆရာတွေ စင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ကျနော်က ကျနော်၏ ကလေးတစ်ဒါဇင်နဲ့တစ်ယောက်ကဗျာထဲက-
That’s why we called it ‘white rainbow’.”
အင်္ဂလိပ်စာပိုဒ်ကို အကျယ်လောင်ဆုံး အော်ဟစ်ရွတ်ဆိုပစ်လိုက်သည်။
ပွဲပြီးတော့၊ ကျနော်တို့အားလုံး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက် အောင်ပွဲခံကြသည်။ ပွဲပြီးပြီးချင်း၊ မန္တလေးတိုင်း စစ်ပဒေသရာဇ်ကြီးရဲ့အထူးစောင့်ကြည့် ထွေ/အုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ခမျာ မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက် နှင့် ထိုင်ရာက ထပြန်သွားတာတွေ့လိုက်ရသည်။
ကျနော်တို့ ပွဲတစ်လျှောက်လုံး နှဲမြိုင်မြိုင်မှုတ်နေတာကို ဘာမှန်းမသိထိုင်ကြည့်ရင်း၊ ပွဲပြီးတော့မှ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သတိထားမိသွားပုံရပါသည်။
ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့က ဒီအခန်းထဲမှာ တယောမထိုးရလို့ တားမြစ်အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။
ကျနော်တို့ကလည်း သူတို့တားမြစ်ထားသလို တယောမထိုးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့၊ ကျနော်တို့အားလုံး နှဲတွေ
ပြိုင်တူ မှုတ်ခဲ့ကြတယ်။ အားရစရာပါပဲ။ ကြည်နူးစရာပါပဲ။ လွမ်းလွမ်းနဲ့မှုတ်လိုက်ကြတဲ့ နှဲသံတွေကလည်း ချောလိုက်ပါဘိသနဲ့။
“နှဲချောတော့ တယော” လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ တယော မထိုးရ ဆိုတဲ့ မန္တလေးမှာ ကိုရွှေအောင်ဝေးတို့လူသိုက် နှဲမှုတ်ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ။
အားလုံးကို လွမ်းပါတယ်။ ။
သြဂုတ် ၂၃- ၂၀၁၆။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အောင်ဝေး, ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ